faharetana-HC fonosana Azia
Manerana ny asanay, ary mandritra ny faritry ny famatsian-tsika, dia manohy manao dingana lehibe amin'ny fampihenana ny dianay momba ny tontolo iainana isika. Ny paikadinay dia miorina amin'izany fandrosoana izany, mametraka fari-pahaizana avo lenta kokoa amin'ny fampihenana ny entona entona entintsika, ny fampihenana ny fako sy ny fampiasana rano, ary ny fampitaovana ireo fitaovantsika amin'ny fomba etika sy tompon'andraikitra indrindra.
1.mba hahazoana antoka fa hampiasa fitaovana 100% FSC voamarina mba hampihenana ny fahasimban'ny tontolon'ny renintsika.
Fonosana 2.100% azo averina indray tsy misy andriamby, tsy misy fizotrany amboniny ary fampidirana plastika taratasy. Ny fonosana dia azo averina namboarina tao anatin'ny dingana kely fotsiny.
3.Mifanohitra amin'ny ranomainty-base petrole nentim-paharazana, ny ranomainty vita amin'ny soja dia heverina ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, mety hanome loko marimarina kokoa, ary manamora ny fanodinana taratasy.
Ny HC Packaging dia miavonavona amin'ny kolontsain'ny serivisy sy ny fanoloran-tenantsika hiantoka ny fivelaran'ny vondrom-piarahamonina ipetrahanay sy ny mpanjifanay ary ny toerana anaovana ny vokatra. Manompo ireo vondrom-piarahamonina ireo izahay amin'ny alàlan'ny programa manome hery, fanomezana ara-bola sy ara-bola ary fanomezana an-tsitrapo mba hisy fiatraikany tsara amin'ny fiarahamonina.
Tamin'ny taona 2020, ny mpilatsaka an-tsitrapo HC Packaging dia nanome anjara biriky maherin'ny 1,000 tamin'ny antony teo an-toerana, avy amin'ny fanomezana sakafo ho an'ny loholona, ​​fanampiana ara-bola ho an'ny sekoly roa any Hunan, Sina, famonosana sy fanomezana boky ho an'ireo mpianatra sahirana, sy maro hafa.
Manampia: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Hira Noho 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam